Galmudug oo war kasoo saartay xiisada Gaalkacyo iyo amarkii P/L - Caasimada Online
Home Warar Galmudug oo war kasoo saartay xiisada Gaalkacyo iyo amarkii P/L
Galmudug oo war kasoo saartay xiisada Gaalkacyo iyo amarkii P/L
Cadaado (Caasimada Online) – War Qoraal ah oo kasoo baxay golaha wasiirada Galmudug ayaa lagu sheegay in kulan ay yeesheen kadib ay isku raaceen in la adkeeyo amaanka deegaanada maamulka Galmudug uu ka taliyo.
War saxaafadeed ka soobaxay Golaha Wasiirada Galmudug Shir ay maanta 29/08/2016 iskugu yimaadeen Golaha Wasiirada Dawlad Goboleedka Galmudug ayaa waxaa looga wada hadlay qodobo ay kamid yihiin siyaasadda, dhaqaalaha iyo nabadgelyada, guud ahaan arrimaha soomaaliya gaar ahaan tan Galmudug. Shirkaas markii golaha wasiiradu ay si qota dheer uga doodeen qodobada kasoo baxay waxaa kamid ah:
In deegaanada Galmudug amnigooda si adag looga shaqeeyo maadaama lagu jiro xili xasaasi ah dalkana ay kadhaceyso doorasho.
Galmudug waxa ay wali dhawreysaa heshiiskii Gaalkacyo lagu kala saxiixday taariiqdu markii ay ahayd 2dii Dec 2015 kaas oo wali qodobada dhiman ay ka fuli Layihiin dhanka Puntland, sidoo kale Galmudug waxa ay cadeyneysaa in aysan marnaba diyaar u ahayn kala xirnaanta bulshada soomaaliyeed Amni Ahaan, Siyaasad Ahaan, iyo Dhaqaala ahaanba.
Goluhu wuxuu maamulka Puntland ugu baaqayaa in ay illaaliyaan darisnimada iyo nabad kuwada noolaashaha shacabka labada maamul, lagana fogaado wax kasta oo keeni kara xasilooni darro.
Goluhu waxa uu u arkaa in isku socodka Ganacsiga iyo Dhaqaalaha bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan Galmudug iyo Puntland in ay tahay mid lagama maarmaan u ah nolosha dhaqan dhaqaale, kala qoqobnaan iyo xanibaad kasta oo hada lagu soo rogana ay saameyn xun ku yeelan karto nolosha bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Galmudug iyo Puntland kunool.
Galmudug waxa ay soo dhawey neysaa wax kasta oo bulshada soomaaliyeed midnimadooda iyo hormarkooda adkeynaya.
Xiisada ka taagan magaalada Gaalkacyo ayaa waxaa cirka kusii shareeray markii Puntland ay soo saartay amaro lagu joojinayo gaadiidka ka taga deegaanada Koofureed ee dhex marayay Galmudug.